Umthetho wobumsulwa, nguMichael Connelly
UMichael Connelly akangombhali obetha etyholweni xa kuziwa ekuboniseni iyelenqe. Kumthombo wayo ongapheliyo wemithombo kunye nokucinga, ukuchaneka kunxibelelanisa konke kunye nokusebenza kakuhle kwe-hook-and-loop ukusuka kwiphepha lokuqala. Ngeli xesha sibuyela emva kunye ...
Amagama abolekiweyo, ngu-Alexis Ravelo
Ukubhala inoveli yolwaphulo-mthetho njengo-Alexis Ravelo wenza into enobunkunkqele okanye enzulu. Ayikokufumana umbulali okanye ukonwabela ukugula okungaqhelekanga kolwaphulo-mthetho. Hayi ubuncinci njengento enye. Kumalunga nomthamo wokubalisa ngokuthelekiswa nalowo uVictor woMthi uhlala ezibophelele ...
Unyaka weBuffalo, nguJavier Pérez Andujar
Isilumkiso kubaqhubi beenqanawa, isishwankathelo sale noveli inokuba yenye inoveli. Kodwa ke kukuba izinto ezibalulekileyo azichazwa ngolo hlobo, ngenceba yokuhlanganisana nje. Ukuba kuyimfuneko ukuphinda wenze umcimbi, kwisenzo okanye kwiinkuthazo zabalinganiswa, emva koko ukuyiphinda kuchukumise ukusuka ...
Ulwandle oluhle, nguAntonio Lucas
Ubukhulu bunomtsalane kangangokuba bunokwandisa imvakalelo yemonotony. Konke kuxhomekeke kwixesha lokuqwalaselwa. Ngenxa yokuba akufani nokungena elwandle ukuze untywilisele emanzini alo azolileyo ngokubetha okucocekileyo okanye ukuya kumaza alo, ibhodi ilungile, kunokuba uphume ...
Iprojekthi yeSilverview, nguJohn Le Carré
Kunyaka nje emva kokusweleka kukaJohn Le Carré, inkosi enkulu yohlobo lwentlola, inoveli yakhe yokuqala yokufa yafika. Kwaye ngokuqinisekileyo idrowa apho umbhali ngamnye egcina amabali epakishwe elinde ithuba lesibini, iya kuphuphuma isebenza kwimeko ...
Ibali likaShuggie Bain nguDouglas Stuart
"Iqhawe nguye nabani na owenza oko anako," uRomain Roilland waphetha ebonisa ngobulumko bonke emhlabeni. Kodwa incinci into esicinga ukuba umntwana angayenza ukubuyisela ubuntwana bakhe. Kuba ukuphulukana nomntwana akuyomvelo ngelixa uswelekelwa ngumzali ...
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha129 Elandelayo →